Perfect365: One-Tap Makeover 7.95.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.95.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား အလှအပ Perfect365: One-Tap Makeover
Perfect365: One-Tap Makeover ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကို virtual မိတ်ကပ် app ကို, ကာလ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ Glam ကစားသမားရှိခြင်းနဲ့တူပဲ!
★ 100 ကျော်သန်းအသုံးပြုသူများနှင့်ရေတွက်
★အဆိုပါယနေ့တွင်ပြရန်, ABC News, သှေးဆောငျနှင့်ဆယျ့ခုနစျတှငျတှေ့မွငျအမျှ
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး, အလွယ်ကူဆုံး-to-ကိုအသုံးပြုဖို့ကို virtual မိတ်ကပ် app ကိုအတူယင်ကောင်အပေါ်သစ်ကိုကြည့်စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအနုပညာရှင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် In-အိမ်သူအိမ်သားအလှအပ Squad နေဖြင့်အပတ်စဉ် created သစ်ကိုစတိုင်များနှင့်အတူကျနော်တို့သွားလာရင်း-ဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းက Selfie, မိတ်ကပ်နှင့်ဖက်ရှင်နိူးများအတွက်နေရာပါပဲ။ တစ်ဦးရဲရင့်သစ်ကိုနှုတ်ခမ်းသို့မဟုတ်ခြောက်ချားဆံပင်အရောင်ကြိုးစားရန်လိုပါသလား? နောက်ဆုံးပေါ်နီကော်ဇောအလှတရားရူပရယူမလား? ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်သို့ပါသေးတယ်ကြည့်? ဒါဟာကိုယ့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါကွာအားလုံးပါပဲ။
★ 20 ကျော်မိတ်ကပ်နှင့်အလှ tools တွေကိုသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်အောင် - မှောင်မိုက်အရိပ်, သဘောထားပြင်းထန်, နှုတ်ခမ်းနီ, နှင့်ပိုပြီး!
★ 200 ကျော် Pre-set Hotstyles - One-ကိုထိပုတ်ပါကြည့်!
★ပု Pro ကိုအရောင် palette နှင့်အတူ Unlimited ထုံးစံအရောင်ရွေးချယ်မှုများ - တမူထူးခြားတဲ့အရောင် combo နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဒီဇိုင်း။
★သင်အကြိုက်ဆုံး YouTube ကိုအနုပညာရှင်တွေထဲကနေဗီဒီယိုလဲ tutorial, ဒါကြောင့်သင်က virtual ရူပ IRL ထပ်ဖွနိုငျပါသညျ!
မမိတ်ကပ်အလင်းရောင်အဘို့အသှယျဝို touchup features တွေ★
★က Facebook, Twitter နဲ့ Instagram ကိုမှတဆင့် Save နှင့်သင့်ရူပဝေမျှ
Perfect365, Inc ကိုမိုဘိုင်းပုံရိပ်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကျနော်တို့ဒီနေ့အကျော်ကြားဆုံးစမတ်ဖုန်းကျော် 1.5 ဘီလီယံအတွက်စွမ်းရည်များ '' စဉ်းစား '' အမြင်အာရုံကို enable ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Intelligent Imaging က™ကိုသုံးပါ။
Instagram ကို: @ perfect365_official
Facebook မှာ: www.facebook.com/perfect365
တွစ်တာ: @ perfect365
Perfect365: One-Tap Makeover အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Perfect365: One-Tap Makeover အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Perfect365: One-Tap Makeover အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
jogoseaplicativosdiversos စတိုး 174 325.7k
Perfect365: One-Tap Makeover ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ အလှအပ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Perfect365: One-Tap Makeover အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.95.7
ထုတ်လုပ်သူ ArcSoft, Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.perfect365.com/about/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: E9:BE:FA:1F:43:35:82:86:BC:D1:A3:F0:89:C8:03:A7:20:40:8A:55
အဖွဲ့အစည်း (O): ArcSoft
Perfect365: One-Tap Makeover APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ